Lars Ranthe – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Another Round (2020) Unicode ကြည့်ပါများလို့သတိထားမိသလောက်ပြောရရင် လူကြိုက်များလို့ကောင်းတယ်သတ်မှတ်ခံရတာ မဟုတ်ဘဲ တကယ်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်အကုန်လုံးနီးပါးမှာတူညီတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေပေမဲ့ ရုပ်ရှင်မဆန်တဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေထဲကဇာတ်ကောင်တွေဟာ လူသိပ်ဆန်ပါတယ်။ မကြီးကျယ်ဘူး မမြင့်မြတ်ဘူး။လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အရှေ့တိုင်းရဲ့ ရုပ်ရှင်မဆန်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာ ရေနီးမြေနီးဓလေ့နီးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကို ၀င်လွယ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းဘက်မှာတော့ ဘုံတူညီမှုတစ်ခုကိုသာ မကြည့်ဘဲ တစ်ကားလုံးချုံကြည့်ရရင် အရှေ့တိုင်းရုပ်ရှင်ထက်နည်းနည်းရင်ထဲ၀င်ဖို့ခဲပါတယ်။ ဒီလို၀င်နိုင်တဲ့ကားက မရှားပေမယ့် မများလှပါဘူး။ အခုဒီဒိန်းမတ်ရုပ်ရှင်က ရုပ်ရှင်မဆန်တဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အရက်သမားတစ်အုပ်အကြောင်းပါပဲ။ သူတို့မှာဖော်ပြပါအရည်အသွေးအပြည့်ရှိပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်ကတော့...သက်လတ်ပိုင်းကျောင်းဆရာတစ်စုနဲ့ သူတို့ရဲ့သက်လတ်ပိုင်းမပြေလည်မှုတစ်ချို့ပေါ်တည်ထားပါတယ်။ သူတို့စကားအတိုင်းပြောရရင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ မွေးကတည်းက အယ်ကိုဟော 0.05%ပါပါတယ်။ ပြောရရင် ဒီအယ်ကိုဟောနှုန်းကိုထိန်းထားခြင်းက စိတ်နဲ့ခန္ဓာ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ် Createive ပိုဖြစ် Realxပိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ အရက်ကိုကျန်းမာရေးအတွက် စသောက်ဖြစ်ရာကနေ ဘယ်လိုတွေ အထိန်းအကွပ်မဲ့သည့်တိုင် ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို ပြထားတယ်လို့ပဲ အကျဉ်းဆိုရမယ်။ သဘောကျစရာကောင်းတာက သူတို့မူးပြီးသောင်းကြမ်းကြတဲ့အခန်းတွေက အရိုးရဲ့ယိုင်တိုင်ယိုင်တိုင်မဟာပုရိသသီချင်းကို ဒိန်းမတ်စတိုင်သရုပ်ဖော်ထားသလိုပါပဲ ကျွန်တော်တော့ကြည့်နေရင်း အရိုးသီချင်းပဲပြေးမြင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်တော့ မသိပေမယ့်ကျွန်တော့်ပတ်၀န်းကျင်က လူတွေအတော်များများကတော့ သက်လတ်ပိုင်းစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနဲ့အတူအရက်သမားဖြစ်လာကြသူတွေများပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ realisticဖြစ်ဖို့ဘက်ကို စကတည်းကဦးတည်ထားတာသိသာပါတယ်။ ကျောင်းဆရာတွေရဲ့ စရိုက်ကိုပုံဖော်ပုံကလည်းပုံဖော်ပုံလဲထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ ဒါရိုက်တာကတော့ The Huntတို့ Celebrationတို့လို ဒရာမာကားကောင်းတွေရိုက်ထားတဲ့ Thomas Vinterbergပါ။ မင်းသား ဒါရိုက်တာ ဘာမှပြောစရာမရှိပေမယ့် ရုပ်ရှင်မဆန်တာလွန်သွားလို့ပဲလားတော့မသိပါဘူး Cinematography ပိုင်းမှာတော့ သာမန်အမြင်အရ ပြောလောက်စရာ ဘာမှမတွေ့မိပါဘူး။ အော်စကာပွဲမှာ Best International Film ...
IMDB: 7.9/10 15811 votes
The Hunt (2012) Unicode imdb 8.3 အထိရထားတဲ့ Hannibal မင်းသားကြီး Mads Mikkelsen ရဲ့ 2012 က ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့ Lucas ဟာ မူလတန်းကျောင်းသူလေးကို လိင်ပိုင်းနှောက်ယှက်မူ့လုပ်ပါတယ်ဆိုပီး စွပ်စွဲချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ မူလတန်းကျောင်းသူလေးက ဘယ်လိုထွက်ဆိုလာမလဲ ? တကယ်ပဲ လိင်ပိုင်းနှောက်ယှက်မူ့တွေဖြစ်နေတာလား ? ကလေးမလေးကပဲလိမ်နေတာလား ? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရမဲ့ Drama ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May Chit ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi imdb 8.3 အထိရထားတဲ့ Hannibal မင္းသားႀကီး Mads Mikkelsen ရဲ႕ 2012 က ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ပါတယ္. ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္တဲ့ Lucas ဟာ မူလတန္းေက်ာင္းသူေလးကို လိင္ပိုင္းေႏွာက္ယွက္မူ႔လုပ္ပါတယ္ဆိုပီး စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ျဖစ္လာတဲ့အခါ မူလတန္းေက်ာင္းသူေလးက ဘယ္လိုထြက္ဆိုလာမလဲ ? တကယ္ပဲ လိင္ပိုင္းေႏွာက္ယွက္မူ႔ေတြျဖစ္ေနတာလား ? ကေလးမေလးကပဲလိမ္ေနတာလား ? စိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရမဲ့ ...
IMDB: 8.3/10 280962 votes